Weerar Ismiidaamin dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Duleedka Magaalada Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Weerar Ismiidaamin dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Duleedka Magaalada Muqdisho
Faah Faahino Dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax Ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay Deegaanka Xaawo Cabdi ee Gobolka Shabeelaha Hoose kaa oo lala eegtay Kolonyo katirsan Ciidamada AMISOM oo halkaasi marayay.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay ruux naftii hure ah oo watay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay kaa oo la eegtay Kolonyo Ciidamada AMISOM katirsan oo xiligaasi marayay Deegaanka Xawao Cabdi oo kuyaala inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye.
Ku dhawaad 20-qof oo rayid ah ayaa qaraxaasi ku dhintay tiro kalana dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii qaraxa uu haleelay gaari PL ah oo ah oo daba socday gawaarida AMISOM ee qaraxa lala eegtay, waxaana la sheegay in gabi ahaan gaarigaasi PL-ka ah uu gubtay ayna ku dhinteen dadkii shacabka ahaa ee saarnaa.
Wariye katirsan Shabakada Alllbanaadir.com oo goobta gaaray ayaa noo sheegay in qaraxa waxyeelada ugu badan uu gaarsiiyay dad rayid ah oo saarnaa gaari Rakaab ah , waxa uuna tilmaamay in dadka aan la aqoonsan Karin hilbahooda oo go go’ay owgeed.
Ciidamada AMISOM ee watay kolonyayada la weeraray ayaa sidoo kale lasoo tabinayaa in waxyeelo uu kasoo gaaray qaraxaasi ismiidaaminta ah inkastoo aan la heyn qasaaraha rasmi ah ee gaaray Ciidamada AMISOM.
Xarakada Al-Shabaab oo sheegatay Masuuliyada weerarkaasi ayaa tilmaantay in ay ku dileen Saraakiil Mareykan ah oo gawaarida AMISOM saarnaa iyo Ciidamo katirsan AMISOM , waxa ayna AMISOM ku eedeeyeen in iyagu masuul ka ahaayeen dadka badan ee shacabka ah ee ku dhintay Weerarkaasi.